Home News Kheyre,Jawaari Iyo Farmaajo oo Ku Kulmay Wasaarada Gashaandhiga + Kulanka oo La...
Kheyre,Jawaari Iyo Farmaajo oo Ku Kulmay Wasaarada Gashaandhiga + Kulanka oo La Isugu Goodiyay
Madaxweynaha Farmaajo ayaa kulan gaar ah waxa uu Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga isugui yeray si uu kulan ula yeesho Gudoomiyaha Baarlmaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali kheyre.
Kulanka ayaa inta badan waxa ay uga hadlayan sidii xal looga gaari lahaa mooshinada isdabayaal wallow mooshinka sida aadka ah banaanka u soo baxay uu yahay kana laga keenay Gudoomiye Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Gudoomiyaha Golaha Shacabka iyo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya labaduba waxa uu ku qancinayaa in ay raadiyaan sidii xal loogu keeni lahaa mooshinka sababay in ay iskhilaafaan gudoomiyaha Golaha Shacabka iyo ku xigeenkiisa 1aad Cabduweli Sheekh Ibraahim Muudeey.
Raiisul Wasaare Xasan Cali Kheyre aya ka carooday mooshin uu qorshenayay Gudoomiye Jawaari isago lacag xoogan ku bixiyay mooshin qalqal galiyay xaalka Gudoomiye Jawaari iado buuq siyaasadeed uu ka dhex bilowday Xildhibaanada Goloaha Shacabka Iyo Gudoonka Sare ee Baarlamanka.
Laga soo bilaabo Arroornimadii hore ee shalay markii Xildhibaano ka mid ah Golaha Shacabka ay sheegeen in ay mooshin ka gudbiyeen Gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya ayaa waxaa bilaawday xiisad Siyaasadeed taas oo saameyn ku yeelatay Xafiisyada Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha.
Wararka aya shegaya in midba midka kale uu ugu goodiyay in kursiga uu ka tuurayo iyado Madaxweyne Farmaajo oo qudhisa ka baqdin qabay in Mooshinadasi ay sameyaan uu si xariifnimo ah u bilaabay in xalkeda uu radiyo inkasto an la hubin wax rasmiga ah ee weli laga xaajonayo iyo xalka laga gaaray xiisada Mooshinka.